Etazonia: Ny vokatry ny famoretam-pihetsiketsehana anti-G20 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2019 7:59 GMT
Nampiantrano ny fihaonambe G20 tamin'ny volana lasa (22-25 aogositra 2010) i Pittsburgh, izay voamaloky ny hetsi-panoherana sy ny fomba mampiady hevitra nanakanan'ny manampahefana ny mpanohitra tamin'ny alàlan'ny Twitter.
Nidiran'ny manampahefana ny tranon'ilay mpikatroka Elliot Madison miara-miasa amin'ny Fikambanan'ny Lalànan'ny Vahoaka, izy sy lehilahy iray hafa dia voampanga ho
“mampiasa Twitter mba hitantanana ny hetsik'ireo mpanao fihetsiketsehana anti-G20 ary mandefa vaovao momba ny hetsiky ny polisy ao Pittsburgh.”
Elieen Clancy ao amin'ny I-Witness Video manontany ny fanapahan-kevitry ny governemanta amin'ny fandraisana ny sioka ho toy ny hetsika mety ho heloka bevava, kanefa nankasitraka ny Twitter nanohana ny fitroaran'ny vahoaka tao Iran ny Departemantam-panjakana.
“Manamarika ny fipoiran'ny Twitter sy ny fitaovana tambajotra sosialy hafa izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny hetsika ara-tsosialy any Birmania, Moldavia sy Iran ny taona 2009. Sarotra ny mahatakatra ny fanamarinana ny fanafihana tany Pittsburgh sy Queens raha jerena ny fankasitrahana amin'ny gazety noho ny fampiasana Twitter ho toy ny fitaovana hanakanana ny governemanta mpanao didy jadona manerantany. Twitter no loharanom-baovao tsara indrindra ho an'ny vaovao tampoka eny an-dàlambe mandritra ny hetsi-panoherana momba ny fifidianana Iraniana, amin'ny sioka tsy azo hamarinana eo noho eo, sy mipoitra ao amin'ny tranokalan'ny New York Times, ny Atlantic ary ny Huffington Post. “
Zava-dehibe ny manamarika eto fa tamin'ny herintaona, nivoaka ny tatitra avy amin'ny fitsikilovan'ny tafika izay milaza fa mety ampiasain'ny mpampihorohoro mba hifandraisana momba ny fanafihana ny Twitter. Noah Shachtman nanoratra momba ilay tatitra sy ny fikarohana tao amin'ny Wired.com.
Indrisy fa tsy nodinihan'ireo tambajotram-baovao lehibe lalina ny fihetsiky ny governemanta manoloana ny mety ho fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny Twitter. Miresaka momba ny “fampitahorana” an'ireo izay nanohitra ny fihaonamben'ny G20 tamin'ny alalan'ny Twitter ny tale misahana ny lalàna ao amin'ny Pennsylvania ACLU, Vic Walczak ao amin'ny CNN.
Bill Quigley, Tale misahana ny lalàna ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Zo ara-dalàmpanorenena ao New York mamaritra ny famoretana ny hetsi-panoherana G20 ho toy ny zo hanohitra anaty fahirano ary milaza fa tsy mitovy ny tontolo manodidina ny fihetsiketsehana raha oharina amin'ny andro talohan'ny 9/11 (11 septambra)
“Misy antony telo lehibe mahatonga ny fihetsiketsehana ho sarotra kokoa hatramin'ny 9/11. Voalohany, dia misy ny tombontsoa ara-politika hanamafisana ny tahotra sy ny tsy fandriampahalemana ary milaza amin'ny vahoaka fa mety ho anisan'ny fihetsiketsehana ny herisetra na dia mihoatra ny 99% aza ny hetsi-panoherana sy ny mpanao fihetsiketsehana aza no tsy nisy herisetra mihitsy nanomboka tamin'ny 9/11 (afa-tsy ireo vahoaka mitondra ny fitaovam-piadian'ny ankavanana ao amin'ny forum momba ny fahasalamana – azonao an-tsaina ve raha nanao izany ireo mpanao fihetsiketsehana Afrikana Amerikana?) Faharoa, nampiasa miliara tamin'ny fampiharana ny lalàna ny governemanta satria amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsy fampiharana ny lalàna sivily intsony ny fihetsik'ziy ireo amin'ny fihetsiketsehana fa saika ara-miaramila, fahafahana mampiseho ny lalaon'izy ireo vaovao, ary fahafahana ho an'ny mpitandro ny filaminana hampihatra ny famoretan'izy ireo faobe. Fahatelo, nandray ny fitarihana ho amin'ny filaminana mandritra ny hetsi-panoherana goavana rehetra ny tafika federaly mba tsy hitenenan'ny mpitandro ny filaminan'ny fanjakana sy ny eo an-toerana ny fomba fitantanana ny hetsika.”